Miss Lin dia mpivarotra orinasam-barotra any Dongguan, sofa lehibe amidy manerana ny firenena. Mba hivarotana tsara kokoa ny sofa, dia nanokatra magazay teo amin'ny sehatra Amazon i Miss Lin. Ankehitriny dia mila mitady orinasam-pitaovana izy hanaterana ny sofa any Etazonia, mba hialana amin'ny tsy fahampian'ny entana. Amin'ny alàlan'ny fikarohana Baidu dia afaka mahita an'i YiXing izy hanadihady ny vidiny, ny fe-potoana, ny fandidiana ary ny raharaha hafa amin'ny fandefasana Amazon FBA ny sofa.
Fantatra fa tamin'ny volana jolay dia nahita ny serivisy mpanjifa YiXing Xiao Xu i Miss Miss tamin'ny alàlan'ny fikarohana Baidu. Taorian'ny nahafantaran'i Xiao Xu ny toe-javatra manokana momba ny entan'ny mpanjifa, ny serivisy mpanjifa Xiao Zhou dia nangataka an'i Peggy mpitantana ny varotra handray an'i Miss Lin. Tamin'ny alàlan'ny fahatakarana lalina dia fantatr'i Peggy fa manana ny fivarotany Amazon ihany koa i Miss Lin any Guangzhou, izay manao sofa. Ankehitriny dia eo amin'ny 5-8 metatra toradroa ao amin'ny trano fanatobiana entana any Los Angeles. Taorian'ny nahafantarany ny vidiny sy ny fetr'andro, dia nanapa-kevitra ny Miss Lin fa hisafidy ny fantsona fandefasana amerikana FBA amerikana lojisialy YiXing Global.
Ny orinasa mitarika ao amin'ny FBA
Ho an'ny asa fandefasana Amazon FBA an'ny logistika YXL Global, mila an'i Miss Lin fotsiny izy hanome ny mombamomba ny entana manokana sy ny fampahalalana momba ny tapakila efa voaomana mialoha ao amin'ny trano fanatobiana Amazon, ary azo esorina roa heny ho eo am-baravarana izany raha tsy mila asa hafa. fangatahana taratasy Tena afa-po amin'ity serivisy manara-penitra ity i Miss Lin, ka nandray fanapahan-kevitra mahafaly toy izao izy. Hatramin'izao dia niara-niasa tamim-pifaliana izahay.